मलेसियामा बाढीका कारण कुन कुन स्थान डुबानमा ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा बाढीका कारण कुन कुन स्थान डुबानमा ?
मलेसियामा आएको भीषण वर्षाको कारण देशभरि नै क्षति पुऱ्याएको छ । हजारौं मानिसहरू आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार वर्षाको कारण आएको बाढीले ११,००० मानिसहरू घरबारविहीन भएका छन्। बाढीका कारण सडकहरु अस्तव्यस्त भएकोले यातायात तथा ढुवानी सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ ।
बाढीपहिरोको घटना ट्रयाकिङ गर्ने एक सरकारी वेबसाइटका अनुसार देशका १६ राज्य र संघीय क्षेत्रमध्ये ८ को जलस्तर शनिबार सम्म खतराको सतहमा पुगेको छ । जसकारण आगामी दिनमा स्थिति झन् खराब हुँदै जाने आकलन गरिएको छ ।
मलेसियन मौसम विभागले आइतबारसम्म भीषण वर्षा हुने चेतावनी दिएको छ । मलेसियाको सेलङर, क्वालालम्पुर र विभिन्न राज्यमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । वर्षाको कारण मानिसहरू आफ्नो घर छोडेर सुरक्षित ठाउँमा गईरहेका छन ।